“Buyiselani . . . izinto zikaThixo kuThixo.”—MATEYU 22:21.
UYehova ubajonga njani oorhulumente babantu?
Simele senze ntoni xa kusiba nzima ukungathathi cala?
Singafunda ntoni kubakhonzi bakaYehova abathembekileyo abangazange bathathe cala?
1. Singamthobela njani uThixo kunye noorhulumente babantu?
IBHAYIBHILE isifundisa ukuba sibathobele oorhulumente babantu, kodwa ikwathi masihlale sithobela uThixo. (IZenzo 5:29; Tito 3:1) Kungenzeka njani oko? UYesu wasinika umgaqo osincedayo sazi ukuba ngubani esimele simthobele. Wathi simele sibuyisele “izinto zikaKesare kuKesare, kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”  (Jonga umbhalo osekugqibeleni.) (Mateyu 22:21) Sibuyisela “izinto zikaKesare kuKesare” xa sithobela imithetho karhulumente, xa sihlonela amagosa karhulumente, naxa sihlawula irhafu. (Roma 13:7) Kodwa xa urhulumente esiyalela ukuba senze into uThixo angayifuniyo, asivumi. Sekunjalo, oko sisoloko sikwenza ngentlonelo.
2. Sibonisa njani ukuba asithathi cala kwezopolitiko?
2 Enye indlela esibuyisela ngayo “izinto zikaThixo kuThixo” kukungathathi cala kwiipolitiki zeli hlabathi. (Isaya 2:4) Ekubeni uYehova ebavumele oorhulumente babantu ukuba balawule, asibachasi. Kwakhona, asibandakanyeki kuyo nantoni na enento yokwenza nomoya wobuzwe. (Roma 13:1, 2) Asizami kutshintsha oorhulumente, okanye siphembelele iinkokeli zopolitiko, yaye asivoti okanye singenele ezopolitiko.
3. Kutheni simele singathathi cala?
3 Zininzi izizathu zokuba uThixo athi masingathathi cala. Esinye sazo kukuba sixelisa uYesu, owayengeyiyo ‘inxalenye yehlabathi.’ Akazange abandakanyeke kwiipolitiki okanye iimfazwe. (Yohane 6:15; 17:16) Esinye kukuba sixhasa uBukumkani bukaThixo. Ekubeni singaxhasi nabaphi na oorhulumente babantu, sishumayela sinesazela esikhululekileyo xa sisithi buBukumkani bukaThixo kuphela obuya kuzilungisa zonke iingxaki zoluntu. Unqulo lobuxoki luthabatha inxaxheba kwezopolitiko, yaye oku kuyabahlukanisa abantu. Kodwa ekubeni thina singathathi cala, simanyene nabazalwana noodadewethu abasehlabathini lonke.—1 Petros 2:17.
4. (a) Sazi njani ukuba kuseza kuba nzima ukungathathi cala? (b) Kutheni simele siziqeqeshe kwangoku ukuhlala singathathi cala?
4 Kusenokwenzeka ukuba sihlala kwindawo apho abantu bengalindelanga ukuba sithathe icala kwezopolitiko. Kodwa njengoko sisiya sisondela ekupheleni kwenkqubo yezinto kaSathana, kuza kuya kusiba nzima ukungathathi cala. Namhlanje abantu sele ‘bengayifuni kwaphela imvisiswano yaye baneentloko ezilukhuni,’ ibe baseza kwahlukana nangakumbi. (2 Timoti 3:3, 4) Abanye kubazalwana bethu sele bechatshazelwa kukutshintsha ngokukhawuleza kweemeko zopolitiko kumazwe abo. Yiloo nto simele siziqeqeshe kwangoku ukuze singathathi cala enoba kungavela imeko enzima kangakanani. Makhe sithethe ngezinto ezine ezinokusinceda.
BAJONGE OORHULUMENTE NGENDLELA UYEHOVA ABAJONGA NGAYO
5. UYehova ubajonga njani oorhulumente babantu?
5 Enye indlela yokuziqeqesha ukuba sihlale singathathi cala, kukubajonga oorhulumente babantu ngendlela uYehova abajonga ngayo. UYehova akazange abanike igunya lokuzilawula abantu xa wabadalayo. (Yeremiya 10:23) Bonke abantu ubajonga njengentsapho enye. Kodwa oorhulumente baye babahlukanisa abantu, kuba besithi olwabo uhlanga lubhetele. Naxa oorhulumente bebonakala belungile, abakwazi ukulungisa zonke iingxaki zabantu. Baye bazingqina beziintshaba zoBukumkani bukaThixo, obuqalise ukulawula ukususela ngo-1914. Kungekudala, obu Bukumkani buya kubatshayela bonke oorhulumente babantu.—Funda iNdumiso 2:2, 7-9.
Ziqeqeshe kwangoku ukungathathi cala enoba kungavela imeko enzima
6. Simele sibaphathe njani abo banegunya eburhulumenteni?
6 UThixo ubavumele oorhulumente babantu ukuba baqhubeke bekho, kuba bagcina uxolo nocwangco. Oku kusinceda sishumayele iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (Roma 13:3, 4) UThixo ude athi masibathandazele abo basemagunyeni ukuze simkhonze ngoxolo. (1 Timoti 2:1, 2) Xa singaphathwa kakuhle sinokucela uncedo lwabasemagunyeni. Wenza kanye oko uPawulos. (IZenzo 25:11) Nakuba iBhayibhile isithi uSathana ngumlawuli woorhulumente, ayitsho ukuba mntu ngamnye onegunya eburhulumenteni ulawulwa nguye. (Luka 4:5, 6) Ngoko asimele sithi mntu uthile eburhulumenteni ulawulwa nguMtyholi. IBhayibhile ithi asimele sithethe kakubi ngabanye.—Tito 3:1, 2.
7. Yiyiphi indlela yokucinga esimele siyiphephe?
7 Sithobela uThixo ngokungaxhasi nawuphi na umlawuli okanye iqela lezopolitiko, naxa izimvo zabo zisenokuba luncedo kuthi. Kusenokungasoloko kulula oku. Ngokomzekelo, khawube nombono wabantu bevukela urhulumente oye wabangela ukubandezeleka ebantwini, kuquka namaNgqina kaYehova. Ewe kona, usenokungafaki sandla kuloo mvukelo, kodwa ngaba ubuya kucinga ukuba abo bavukeli benza into efanelekileyo, uze ubanqwenelele impumelelo? (Efese 2:2) Ukuba asifuni kuthatha cala, asimele sivakalelwe kukuba icala elithile lingcono kunelinye. Oku sikubonakalisa ngoko sikuthethayo noko sikwenzayo.
‘LUMKA UKANTI UBE MSULWA’
8. Xa kunzima ukungathathi cala, ‘sinokulumka’ njani nakuba sizigcina ‘simsulwa’?
8 Indlela yesibini yokungathathi cala, ‘kukulumka njengeenyoka ukanti sibe msulwa njengamahobe.’ (Funda uMateyu 10:16, 17.) ‘Silumkile’ xa sizilungiselela kwangaphambili iimeko ezinzima. Yaye siba ‘msulwa’ xa singathathi cala kwezo meko. Makhe sithethe ngezinye zezo meko, noko sinokukwenza ukuze singathathi cala.
9. Simele silumkele ntoni xa sincokola nabanye?
9 Ukuncokola. Simele silumke kakhulu xa abantu beqalisa ukuthetha ngezopolitiko. Ngokomzekelo, xa sincokola nomntu ngoBukumkani bukaThixo, asimele sithi siyavumelana okanye siyaphikisana nembono yeqela okanye inkokeli ethile yezopolitiko. Kunokuba sithethe ngoko kumele kwenziwe ngabantu ukulungisa iingxaki ezikhoyo, simele sibonise ngokusuka eBhayibhileni indlela uBukumkani bukaThixo obuya kuzilungisa ngayo. Ukuba abantu baxambulisana ngemibandela efana nokutshatiswa kwamafanasini okanye ukuqhomfa, simele sibaxelele oko kuthethwa liLizwi likaThixo nendlela esikusebenzisa ngayo ebomini bethu. Ukuba omnye umntu uvakalelwa kukuba imithetho ethile imele isuswe okanye itshintshwe, thina asithathi cala yaye asimnyanzeli ukuba atshintshe uluvo lwakhe.
Hlala uthelekisa oko ukuvayo ‘namazwi aphilileyo’ aseBhayibhileni
10. Sinokuqiniseka njani ukuba asithathi cala xa sibukela okanye sifunda nantoni na kumajelo eendaba?
10 Amajelo eendaba. Ngamanye amaxesha ibali leendaba lisenokubaliswa ngendlela exhasa icala elinye. Oku kuxhaphake kakhulu kumazwe apho amajelo eendaba ephethwe ngurhulumente. Ukuba oonondaba okanye iintatheli zithatha icala, simele silumke singosuleleki. Ngokomzekelo, khawuzibuze, ‘Ngaba ndiyakuthanda ukumamela unondaba othile kuba ndivumelana nezimvo zakhe zopolitiko?’ Ukuze uhlale ungathathi cala, kuphephe ukubukela okanye ukufunda iindaba ezithatha icala kwezopolitiko. Kunoko zama ukufumana iindaba ezingathathi cala. Yaye hlala uthelekisa oko ukuvayo ‘namazwi aphilileyo’ aseBhayibhileni.—2 Timoti 1:13.
11. Kunokuba nzima njani ukungathathi cala xa izinto eziphathekayo esinazo zibaluleke kakhulu kuthi?
11 Ukuthanda izinto eziphathekayo. Xa imali nezinto zethu zibaluleke kakhulu kuthi, sisenokukufumanisa kunzima ukungathathi cala. Emva ko-1970, amaNgqina amaninzi eMalawi kwafuneka ancame zonke izinto awayenazo, kuba ayengavumi ukungenela umbutho wezopolitiko. Okulusizi kukuba, abanye abazange bafune ukuncama ubomi babo obutofotofo. Omnye udade ogama linguRuth ukhumbula oku, “Abanye bahamba nathi ukuya elubhacweni kodwa kamva bangenela umbutho wezopolitiko baza babuyela ekhaya kuba bengafuni ukunyamezela ubunzima kwinkampu yeembacu.” Kodwa uninzi lwabantu bakaThixo alunjalo. Bahlala bengathathi cala nokuba loo nto iphumela ekubeni bangabi namali okanye baphulukane nento yonke ethi bona.—Hebhere 10:34.
12, 13. (a) UYehova ubajonga njani abantu? (b) Sinokuzibona njani xa siqhayisa ngelizwe lethu?
12 Ukuqhayisa. Kuqhelekile ukubona abantu benebhongo yaye beqhayisa ngohlanga, izithethe, isixeko nelizwe labo. Kodwa uYehova akacingi ukuba umntu okanye iqela labantu libhetele kunelinye. Kuye, sonke siyalingana. Ewe kona, uYehova usenze sahluka omnye komnye, yaye oku kwahluka siyakuvuyela. Akalindelanga ukuba sohlukane nezithethe zethu. Sekunjalo, akafuni sicinge ukuba singcono kunabanye.—Roma 10:12.
13 Asimele siqhayise ngelizwe okanye uhlanga lwethu size sicinge ukuba lubhetele kunolunye. Ukuba sivakalelwa ngolo hlobo, kunganzima ngathi ukungathathi cala. Oku kwenzeka ngenkulungwane yokuqala. Abanye abazalwana abangamaHebhere abazange babaphathe kakuhle abahlolokazi abangamaGrike. (IZenzo 6:1) Sinokuzibona njani xa siqalisa ukungenwa kukuqhayisa okulolo hlobo? Ukuba umzalwana okanye udade osuka kwenye indawo ukunika icebiso, ngaba ukhawuleza ucinge ukuba, ‘Senza izinto bhetele apha,’ uze emva koko ungalamkeli? Ukuba kunjalo, khumbula esi siluleko sibalulekileyo: “Ngokuthobeka kwengqondo, nibagqala abanye njengabongamileyo kunani.”—Filipi 2:3.
14. Unokusinceda njani umthandazo, yaye nguwuphi umzekelo woko oseBhayibhileni?
14 Indlela yesithathu yokungathathi cala, kukuthembela ngoYehova. Thandazela umoya oyingcwele, oya kukunika umonde nokuzeyisa. Ezi mpawu ziya kukunceda xa kunokwenzeka urhulumente enze into ngokunganyaniseki okanye engekho sikweni. Cela uYehova akuphe ubulumko bokubona imeko enokwenza kube nzima ukuba ungathathi cala. Mcele akuncede wenze okufanelekileyo. (Yakobi 1:5) Usenokuvalelwa okanye wohlwaywe ngenxa yokuthembeka kuYehova. Ukuba kunjalo, thandazela inkalipho ukuze ukwazi ukucacisela abanye ukuba kutheni ungathathi cala. Qiniseka ukuba uYehova uya kukunceda unyamezele.—Funda iZenzo 4:27-31.
Cingisisa ngeZibhalo eziya kukunceda ungathathi cala nezikunceda ube nombono wehlabathi elitsha
15. IBhayibhile inokusinceda njani singathathi cala? (Jonga nebhokisi ethi “ ILizwi LikaThixo Labanceda Abathatha Cala.”)
15 UYehova usinike iBhayibhile ukuze isomeleze. Cingisisa ngeZibhalo eziya kukunceda ungathathi cala. Zama ukuzibethelela engqondweni nokuzikhumbula, kuba ziya kukunceda ukuba kunokwenzeka ungabi nayo iBhayibhile. Zinokulomeleza ithemba lakho ngoko uThixo akutshoyo ngekamva. Siyalidinga eli themba ukuze sikwazi ukunyamezela intshutshiso. (Roma 8:25) Khetha iZibhalo ezikunceda ube nombono wezinto onqwenela ukuzinandipha kwihlabathi elitsha, uze uzibone ulapho.
ZUZA KUBAKHONZI ABANYANISEKILEYO BAKAYEHOVA
16, 17. Sinokufunda ntoni kwimizekelo yabakhonzi bakaThixo abathembekileyo abangazange bathathe cala? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
16 Into yesine enokusinceda singathathi cala, kukucinga ngemizekelo yabakhonzi abanyanisekileyo bakaYehova. Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile baninzi ababa nenkalipho, baza benza izigqibo ezabanceda abathatha cala. Cinga ngoShadraki, uMeshaki noAbhednego, abaye bala ukunqula umfanekiso oqingqiweyo owawumela urhulumente waseBhabhiloni. (Funda uDaniyeli 3:16-18.) Le ngxelo yeBhayibhile inceda amaNgqina amaninzi namhlanje ukuba akhaliphe aze angavumi ukunqula iiflegi zamazwe ahlala kuwo. UYesu akazange azibandakanye neepolitiki okanye ezinye izinto ezahlula abantu. Wayesazi ukuba umzekelo wakhe omhle uza kunceda abafundi bakhe. Wathi: “Yomelelani! Mna ndiloyisile ihlabathi.”—Yohane 16:33.
17 Kule mihla yethu baninzi abazalwana abaye abathatha cala. Abanye baye bathuthunjiswa, bavalelwa entolongweni baza babulawa ngenxa yokuhlala kwabo bethembekile kuYehova. Imizekelo yabo inokusinceda sibe nenkalipho. Omnye umzalwana waseTurkey wathi: “UFranz Reiter wayengumzalwana oselula owabulawa ngenxa yokuba esala ukungenela umkhosi kaHitler. Ileta awayibhalela umama wakhe ngobusuku bangaphambi kokufa kwakhe, yabonisa ukholo olumangalisayo nokuthembela kwakhe ngoYehova, yaye ndandifuna ukulandela umzekelo wakhe ukuba kunokwenzeka ndijamelane nemeko enjalo.” —Jonga umbhalo osekugqibeleni.
18, 19. (a) Abazalwana noodade abasebandleni lakho banokukunceda njani ungathathi cala? (b) Uzimisele ukwenza ntoni?
18 Abazalwana noodade abasebandleni lakho banokukunceda ukuba ungathathi cala. Xelela abadala xa ukwimeko enzima. Banokukunika amacebiso asuka eBhayibhileni. Kwakhona, ukuba abanye ebandleni lakho bayayazi imeko yakho, banako ukukukhuthaza. Bacele ukuba bakuthandazele. Nathi simele sibaxhase abazalwana bethu size sibathandazele. (Mateyu 7:12) Ukuze ufumane uludwe lwamagama abazalwana abasentolongweni, jonga inqaku eliku-jw.org/xh elithi “AmaNgqina KaYehova Abanjelwe Ukholo Lwawo—Ngokweengingqi,” elifumaneka phantsi kwendawo ethi, IINDABA > EZOMTHETHO. Khetha amagama ambalwa kolu ludwe, uze ucele uYehova abancede bakhaliphe baze banyaniseke kuye.—Efese 6:19, 20.
19 Njengoko isiphelo sisondela, simele silindele ukuba oorhulumente basinyanzele ukuba sithathe icala. Yiloo nto kanye simele sizimisele kwangoku ukungathathi cala kweli hlabathi lahluleleneyo!
^  (isiqendu 1) Xa uYesu wayethetha ngoKesare wayebhekisela kurhulumente. Ngelo xesha kwakulawula uKesare, ibe wayengoyena mntu unegunya eliphakamileyo.
^  (isiqendu 17) Jonga incwadi ethi AmaNgqina KaYehova—Abavakalisi BoBukumkani BukaThixo, iphepha 662 nebhokisi ethi “Wafela Ukuzukisa UThixo” kwiphepha 150 lencwadi ethi UBukumkani BukaThixo Buyalawula!
ILizwi LikaThixo Labanceda Abathatha Cala
“Ukucingisisa ngeMizekeliso 27:11, uMateyu 26:52 noYohane 13:35, kwandinceda ndomeleza isigqibo sam sokungangeneli imfazwe. Zaphinda zandinceda ezi ndinyana ndahlala ndizolile ebudeni bokuxoxwa kwetyala lam.”—UAndriy, waseUkraine.
“UIsaya 2:4 wandinceda andathatha cala xa ndandivavanywa. Ndaba nombono wehlabathi elitsha elinoxolo, apho kungasayi kubakho mntu uphethe isixhobo ukuze enzakalise ummelwane wakhe.”—UWilmer, waseColombia.
Asithathi cala kwimibandela yeli hlabathi: Asithathi cala kwimibandela yehlabathi okanye iimfazwe kuba sinyanisekile kuBukumkani bukaThixo